Ciidamada Bilayska ee Maamulka Puntland Oo Gacanta Ku Dhigay Maydka iyo Dhaawaca Koox Fulisay Hawlgal Lagu Dhaawacay Sarkaal ka Tirsan Maamulka | Araweelo News Network (Archive) -
Ciidamada Bilayska ee Maamulka Puntland Oo Gacanta Ku Dhigay Maydka iyo Dhaawaca Koox Fulisay Hawlgal Lagu Dhaawacay Sarkaal ka Tirsan Maamulka
Boosaaso(ANN)Ciidamada amaanka ee Magaalada Boosaaso ayaa maanta dil iyo dhaawac u gaystay kooxo hubaysan oo maanta fal dhaawac ah u gaystay sarkaal katirsanaa Wasaaradda Maaliyadda ee maamul goboleedka Puntland. Dilka iyo dhaawac ayaa
yimi kadib markii labo nin oo ku hubaysan Bastoolado ay maanta dhaawac u gaysteen sarkaal katirsanaa Wasaaradda Maaliyadda maamulka Puntland, kuwaas oo markii ay dhaawaca gaysteen isku deyey inay baxsadaan. Laakiin Ciidamada Booliska ee Magaalada Boosaaso oo wax yar ka dib goota yimi ayaa toogtay mid ka mid ahaa raggii dhaawaca gaystay. sidoo kale waxay Ciidamadu dhaawac halis ah u gaysteen kii kale, iyadoo markii hore dadka dhaawaca gaystay ay ka koobnaayen labo ruux.
Cisbitaalka guud ee Magaalada Boosaaso ayaa la geeyey maydka ninka ay Ciidamadu dileen, sidoo kale waxaa cisbitaalka la geeyay ninka kale ee dhaawacmay, iyadoo lagu dawaynayo halkaa. Balse saraakiisha caafimaadka Cusbataalka Boosaaso ayaa noo sheegay in ninka dhaawaca ah uu qabo dhaawac culus. Sidoo kale waxa goobtaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidanka Bilayska ee Boosaaso.
Guddoomiyaha Gobolka Bari ee Boosaaso C/xaafid Cali Yuusuf oo warbaahinta kula hadlay gudaha Cusbataalka ayaa waxa uu sheegay in raggan ay qayb ka ahaayeen kooxo sida uu sheegay falal amaan darro ah ka wada Magaalada Boosaaso, kuwaas oo uu sheegay inay ka hortageen Ciidamada Booliska ee dilka iyo dhaawaca u gaystay.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dhaawaca sarkaalka katirsan Maaliyadda uu yahay mid culus laguna dabiibaayo cusbitaalka sida gaarka ah loo leeyahay ee Puntland Hospital, isagoo xusay in markii nimankaa ciidanku eryanayeen uu dhaawac fudud kasoo gaadhay mid ka mid ah Ciidamada Booliska.
Gudaha cusbitaalka Magaalada Bossaso ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay 2-bastooladood oo waxyaabaha qarxa oo ay wateen kooxaha dhaawaca u gaystay sarkaal katirsanaa wasaaradda Maaliyadda, kuwaas oo iyagana ay dil iyo dhaawaca u gaysteen Ciidamada Booliska.
Gudoomiyaha Gobolka Bari ee Boosaaso C/xaafid Cali Yuusuf ayaa sheegay inay labada nin ee falkaa ku dhaawacay sarkaalka ka tirsanaa wasaaradda maaliyada oo midkood dhintay, ka kalena isagoo dhaawac ah ciidanku qabteen ay kasoo jeedaan Koonfurta Somalia, balse aanay ahayn dadka deegaanka. Sidaa awgeed ay ciidamadoodu wadaan qorshe dadka Magaalada iska jooga ee aan la ogayn waxay ka shaqeeyaan lagu qabanayo, kuwaas oo sida uu sheegay ay u arkaan kuwa la shaqeeya kooxaha amaanka wax u dhimaya.
Talaabada ay Ciidamada amaanka ee Magaalada Boosaaso ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan koox sidan oo kale fulisay hawlgal qorshaysan ayaa noqonay tii ugu horaysay, iyadoo ay falal dilal lagu beegsado saraakiil ka tirsan maamulka Puntland iyo dad kaleba ka dhaceen halkaa mudooyinkii u danbeeyay, kuwaas oo aan lagu guulaysan dadkii fuliyay.